Kuberekwa Zviratidzo neMavhiki, Kuberekwa Kwekudzivirira, Vhidhiyo
2 Mavhiki Masikana
8 Mavhiki Masikana
12 Mavhiki Masikana
16 Mavhiki Masikana
Kubata Q uye A
Kubata Zviratidzo Svondo Nevhiki
Kubata Kubata uye Kubata Vhidhiyo
Kugamuchirwa kunyika yenhadziro yemimba! Tinotaura kuti nekumwemwerera nokuti ndeye chimwe chezvinhu zvakawanda zvaunoshandiswa paunenge uine pamuviri vhiki nevhiki. Kuberekwa kunogona kuva nguva inonakidza muupenyu hwemukadzi, asi zvakare yakazara nemibvunzo uye zvinetso. Apo mimba inowedzera, iwe unogona kunge usingazivi kuti chii chaunotarisira vhiki imwe neimwe uye unofarira nezvekudzivirira zviratidzo vhiki nevhiki. Tinogona kubatsira.
Kune avo vanoshamisika nezvezuva rako rakakodzera, tinopa a kutora vhiki yekuvhara-vhiki kwezuva rakakodzera, iyo inobatsira zvakawanda. Tinopawo murayiridzo wekuti ungaverenga sei zuva rako rakakodzera. Ongorora kakawanda kuti ugare uine ruzivo nezvekubata kwako zviratidzo zvevhiki. Enda kushanyira Q uye A chikamu kubvunza mubvunzo uye kuverenga mhinduro. Tichengetedzei muchitsiko chako paunenge uchiita pamuviri vhiki nevhiki. Iwe uri kuona zviratidzo zvemazuva ose, zvisingaiti here? Chero chinokonzera kufunganya pamusoro pekubata kwako pamuviri mutsva? Hatisi Dr asi mazano edu anogona kubatsira. Tinogona kubatsira kuziva kuti kana uchinge uine zviratidzo zviratidzo vhiki nevhiki zvinowanzoitika panguva yako yepamuviri. Zvakare, zviri nani kana iwe uchiziva zvaunotarisira vhiki imwe neimwe. Tinopa vhiki nevhiki vhangeri, kutanga ne mimba zviratidzo vhiki 1. Ndezvipi zviratidzo zvekuita pamuviri nevhiki 2, nevhiki 5, nezvimwe. Kune vhiki nevhiki vechirwere chekudzivirira, pamwe nekerenda kuti ione muviri wako nevana vako kuburikidza neizvi zvinoshamisa
Kuberekwa Video Series
Vhiki 1 -Vhiki 2 -Vhiki 3 – Vhiki 4 -Vhiki 5 – Vhiki 6 – Vhiki 7-Vhiki 8 -Vhiki 9 – Vhiki 10 – Vhiki 11 -Vhiki 12 – Vhiki 13 – Vhiki 14 – Vhiki 15 -Vhiki 16 – Vhiki 17 – Vhiki 18 -Vhiki 19 -Vhiki 20 – Vhiki 21 – Vhiki 22 -Vhiki 23 – Vhiki 24 – Vhiki 25 Vhiki 26 -Vhiki 27 – Vhiki 28 – Vhiki 29 – Vhiki 30 – Vhiki 31 -Vhiki 32 – Vhiki 33 – Vhiki 34 – Vhiki 35 -Vhiki 36 – Vhiki 37 - Vhiki 38 – Vhiki 39 – Vhiki 40
Pose patinogona, tinopa zvakakodzera pamuviri mavhidhiyo naizvo. Isu tiri kunyanya kufunga nezvehutano hwehutano uye nekupa mazano ekuzvitakura uye mazano paunenge uine pamuviri vhiki nevhiki, sekivhidhiyo ichibatanidza pamusoro. Vanouya kwamuri kwamuri Consumer Health Digest. Tiri kuwedzera kunyange, uye vhidhiyo ichipfuurira pasi peji iri pasi inokurukura kutengesa mwana. Tichawedzera zvikwata nguva dzose pamusoro pekutengesa vana, zvipo zvekuregeresa, kunyange mwana wedheche pfungwa.
Asi pane imwe webhusaiti inodiwa kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekuita pamuviri here? Tinofunga kudaro! Kune rimwe, kamuviri yekuvhara kwevhiki yekubata kuchabatsira kuverenga zuva rako rakakodzera. Iwe unogona kunge uine mibvunzo yekutanga pane ino: Ndeipi iyo yose yekudzivirira zviratidzo vhiki nevhiki? Ndezvipi zvimwe zvekare kare nyevero zviratidzo zvekudzivirira? Ndingaziva sei kana ndine mimba, kana kuti kuve nekuita pamuviri kuongorora kwakarurama, kana kuti kusarudza sei uye chiremba. Zvichida unayo mibvunzo pamusoro pezvirwere zvepabonde uye nekuzvitakura kana kudzidzira uchiri pamuviri. Ndezvipi zvitatu zvakasiyana-siyana, uye pamuviri zviratidzo nevhiki pane imwe nhanho. Zvichida uri kushamisika nezvekuyamwisa, mwana mucheche, nezvimwewo. Kubata pamuviri wekuvhara kwevhiki yevhiki nekumwe ruzivo rwepaiti yedu, Kubata kwevhiki, isu tinopedza kupindura mibvunzo iyi uye akawanda akawanda! Tinovhara pamuviri wako mumutambo wakafanana, nguva yakagadzirwa nemafashoni, panguva yekubata kwako vhiki nevhiki, trimester kusvika kune matatu. Tinokumbundira mberi nemashoko uye mazano asati aita pamuviri, zvinhu zvokufungisisa usati waita pamuviri. Tinoenda danho rimwe mberi, tichikurukurirana kubereka nekurera mwana ane utano munyika yanhasi. Nekuenderera mberi kwekufambira mberi, kubata kwevhiki yekuvhara kwevhiki kwezuva rakakodzera kuchapa ruzivo rwakarurama. Iwe uchakwanisa kutsvaga zuva rekupedzisira kwako uyewo zuva rako rekuberekwa. Ikoko pachava nemimwe nzira yakakwirira yekuverenga kuve nekudzivirira kwako zviratidzo nevhiki.
Sezvataitaura tichave tichiwedzera zvinyorwa nguva dzose pamusoro pekutengesa vana, zvipo zvekuregeresa, kunyange mwana wemvura. Ramba uchitarisa! Hapana chinofananidza nechishamiso nemashiripiti ekudzivirira. ndiyo mukana wako wekubatanidzwa muhupenyu hukuru mukusika. Kuronga mberi kwechiitiko ichi kunogona kuvandudza mikana yako yekuita zvakanaka iwe nechecheche. Inogona kubatsira kuziva kana kuderedza zviratidzo zvekuita pamuviri. Nzira yako yemararamiro inobata hutano hwemwana wako, asi inogona kukubatsira iwe zviratidzo zvekuberekwa vhiki nevhiki. Nokuronga mberi kwekubata kwako pamuviri vhiki nevhiki, iwe unoita kuti iwe nevana vako vaonekwe zvinhu zvakanaka uye usadzivisa zvinhu zvinokuvadza paunenge uine pamuviri. Nenguva iyo vakadzi vakawanda vanoziva kuti vane pamuviri ivo vari mwedzi miviri kusvika kumimba yavo pamuviri. Nenguva iyo pavanoona chiremba wavo, vari mwedzi miviri kana mitatu pamwe chete. Ndokusaka kutora mitezo yekuita mitezo nevhiki ndeyeiko. Vhiki dzekutanga dze12 dzekudzivirira dzakakosha zvikuru nokuti iyi ndiyo apo mwana anoumba maitiro makuru ehurumende. Zvinhu zvakawanda zvinokosha zvinogona kuitika usati waona kubata kwako kana kuona chiremba wako. Kuve wakagadzikana pakuve nepamuviri kunoreva kugadzikana kwepanyama uye kwepfungwa. Iwe uchaona kuchinja kukuru mukati mekutora kwako pamuviri. Kuva nehutano hwakanaka hutano husati hwaita pamuviri kunogona kukubatsira kubata nehutano hwepanyama uye hwepfungwa dzekudzivirira, kubasa uye kubereka. Ichakubatsira iwe kugadzirira kutarisira mwana achangoberekwa zvakare. Isu tinokubatsira kuti uzive kutakura kwako zviratidzo nevhiki. Kubva pakubata kwekuvhara kwevhiki yevhiki uye yakabatana nemashoko e blog, iwe uchagadzirirwa zvakakwana.
Tarisa nzvimbo yedu mumitauro yakasiyana-siyana, uchishandisa kufamba kwepamusoro. Uyewo, ndapota ivai vakasununguka kutaura pamusoro pekuzvidzivirira kwevhiki vhiki nevhiki, zviratidzo, zviitiko, nezvimwe. Dzokera nokukurumidza!
Categories Select Category 12 Mavhiki Masikana 16 Weeks Zviratidzo Zviratidzo 18 Mavhiki Masikana 2 Weeks Zviratidzo Zviratidzo 8 Weeks Zviratidzo Zviratidzo Kubvumira mukudzivirira Zviratidzo zvekutanga zvekuzvimba Utano hwakanaka Molar Pregnancy Kuswera Mambakwedza Kuberekwa Pregnancy Discharge Kubata Zviratidzo Kubata Vhiki Mavhiki Nevhiki Tubal Kuberekwa
Isu hatisi vanachiremba uye ruzivo rwepawebsite ino hazvirevi mazano ekurapa. Tinoita zvatinokwanisa kuti tipe ruzivo rwakarurama asi isu hatisi kuvimbisa. Tinokukurudzira kuti utsvake mazano ekurapa ane njere kubva kwaDhodhoro kana OBGYN.
Ndinotenda nekuda kwekubuda kunze kweBlog Pregnancy by Week. Nheyo yemaiti iyi kubata vhiki nevhiki. Tinopa zviratidzo zvekudzivirira vhiki nevhiki, uye ruzivo rwakabatana, kutanga nekutanga pamuviri munguva yekutanga.
Kubata Vhiki yeVhiki 40
Kubata Vhiki yeVhiki 39
Kubata Vhiki yeVhiki 38
Kubata Vhiki yeVhiki 37
Kubata Vhiki yeVhiki 36
Copyright © Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Zvinonzwisisika: Hatisi vanachiremba uye ruzivo rwepawebsite ino hazviiti mazano ekurapa. Tinoita zvatinokwanisa kuti tipe ruzivo rwakarurama asi isu hatisi kuvimbisa. Tinokukurudzira kuti utsvake mazano ekurapa ane njere kubva kwaDhodhoro kana OBGYN.